बधाई छ यी नेपाली युवालाई! जस्ले बनाए पानीबाट चल्ने गाडी… भिडियोमै हेर्नुहाेस् « Nipolnews
बधाई छ यी नेपाली युवालाई! जस्ले बनाए पानीबाट चल्ने गाडी… भिडियोमै हेर्नुहाेस्
बुटवल । पानीबाट गाडी चल्छ भन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्ला। तर, नेपालमा यो सम्भव भएको छ। यहाँका एक युवा इन्जिनियरले पानीबाट गाडी चलाउने उपकरण तयार परेका छन्। जसलाई जुनसुकै गाडी तथा मोटरसाइकलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बुटवल मिलनचोकका युवा शिशिर जिसीले ‘फ्युल सेभर किट’ तयार पारेका छन्। भारतको बैंगलोरबाट मेकानिकल इन्जिनियररिङ गरेका उनले साना गाडी र मोटरसाइकलमा प्रयोग गर्न सकिने डिभाइस बनाएका हुन्।